Maorisy : vehivavy malagasy nahatrarana héroïne 260 grama | NewsMada
Maorisy : vehivavy malagasy nahatrarana héroïne 260 grama
Tratran’ny sampandraharahan’ny fadin-tseranana atsy Maorisy, ny 4 marsa teo, ny vehivavy Malagasy iray, 37 taona, nitondra rongony heroine milanja 260 grama. Voalaza fa tombanana any amin’ny 41, 6 tapitrisa Ar ny tetimbidin’ireo rongony ireo, tratra tao anatin’ny sosona anatin’ny poketrany. Nandritra ny fanadihadian’ny tompon’andraikitra maorisiana azy, nambarany fa fantany tokoa fa nitondra zavatra tsy ara-dalàna izy, saingy noheveriny fa vovo-bolamena ny nentiny tao anaty poketrany.
Nantsoin’ny tompon’andraikitry ny raharaha ladoany ao amin’ny masoivohon’i Madagasikara any Maorisy indray izy ny 13 marsa teo, teo imason’ny tompon’andraikitry ny Vondrona miady amin’ny zava-mahadomelina maorisiana (ADSU). Nilaza ilay vehivavy fa fanomezana noho ny tsingerintaona nahaterahany ny nahazoany dia ho any Maorisy, nomen’ny namana teratany srilankey iray monina any Japon. Mipetraka any Toamasina izy ary sambany ny tany amin’ity Nosy ity, ka nanoro hevitra azy ny ho any ny namany vehivavy akaiky, efa mpandeha matetika any Maorisy ary nanolo-tena hikarakara ny antontan-taratasiny. Vokatry ny fifampitokisany teo aminy sy ity farany, nekeny ny nindraman’ilay namany ny poketrany miloko mainty, lazainy fa ilainy manokana amina fety iray.
Nisy tranga toy ity, ny febroary teo
Niainga tany Toamasina izy ary nihaona tamin’ilay vehivavy namany teto Antananarivo, mialoha ny handehanany ho any Maorisy. Tonga teny Ivato izy roa 10 minitra mialoha ny fikatonan’ny fandraisana anaty lisitra ny mpandeha, ary naverin’ilay namany ilay poketra. Nolazain’ity farany taminy fa misy fiangaviana azy, fa vovo-bolamena ny ao anatin’ilay poketra ary nampahafantariny ny olona homena azy rehefa tonga any Maorisy.
Tsiahivina fa nisy tranga toy izao koa tratran’ny ladoany maorisiana ny volana febroary teo. Midika izany fa misy tambajotra mihitsy manao ity trafika rongony ity. Efa tratran’ny tompon’andraikitra any an-toerana koa ilay saika handray ny entana nentin’ilay vehivavy malagasy. Mitohy ny fanadihadiana.